Izipho ezihamba phambili zobuchwepheshe zosuku lobaba | Izindaba zamagajethi
Ngabe ufuna isipho sikababa wakho? Lokhu kuhamba phambili ngobuchwepheshe
NgeSonto elizayo “Usuku Lobaba” futhi njengoba iningi lethu lisengenaso isipho, besifuna ukukunika isandla, sikubonise kule ndatshana isihloko esithi izipho ezinhle kakhulu zobuchwepheshe ongazinika uyihlo kanye nalabo esivele sikuxwayisa kusengaphambili ukuthi uzolunga ngokuphepha okuphelele.
Ngaphezu kwalokho, nokwenza kube lula kakhulu, iningi lalabo esizokukhombisa ukuthi ungalithola ku-Amazon, ngakho-ke kufanele ulandele isixhumanisi esisibeke ukuyithenga futhi siyithole emahoreni ambalwa ku ikhaya lakho. Uma kufanele uthengele uyihlo isipho, ungavumeli kudlule isikhathi esithe xaxa, bese unquma ngenye yezinketho esiziphakamisa namhlanje.
1 I-Nintendo Classic Mini (NES)
2 Ukubhaliselwa kwe-Netflix
3 IMi Band S1
4 I-smartphone yaphakathi nobubanzi; IMoto G4 Plus
5 I-smartphone ephezulu; I-Samsung Galaxy S7 Edge
6 Okubhaliselwe ku-Spotify
8 I-Samsung Gear S3 Frontier
I-Nintendo Classic Mini (NES)
Abazali abaningi abanezingane ezineminyaka engama-30 nengama-40 bachitha amahora amaningi nezingane zabo bedlala enye yeziduduzo zokuqala ukungena emakethe. Sikhuluma impela nge-NES, manje ebuye ne I-Nintendo Mini Mini futhi usinikeze imidlalo engamashumi amathathu yokuyijabulela ngaphandle kwemingcele.
Ukutholakala kwale divayisi kuyinkinga enkulu, futhi yize intengo yayo esemthethweni ingama-euro angama-60, kunzima ukuthola amayunithi atholakalayo ngaleyo ntengo. E-Amazon singayithenga ngaphandle kwenkinga futhi siyithole emahoreni ambalwa, kepha intengo yayo idubula ifike kuma-euro angama-125.
Enye yezinto okungenakwenzeka ukungasondeli nazo yi- Ukubhaliselwa kwe-Netflix, lapho noma yimuphi umzali angajabulela inani elikhulu lama-series, ama-movie noma ama-documentary azo zonke izinhlobo.
Intengo iqala kuma-euro angu-9.99, ukwazi nokwabelana ngakho nobaba wakho ukuze isipho siphume kwezomnotho kakhulu. Vele, qaphela ukuthi uzomnikeza isikhokhelo esingakanani ngoba ungagcina ukhokhele uyihlo iNetflix iminyaka.
Bhalisela iNetflix LAPHA.
IMi Band S1
Okugqoka okungabizi kakhulu esingakuthola emakethe cishe yi IXiaomi Mi Band S1, esivumela ukuthi silinganise yonke imisebenzi ebonakalayo yosuku lwethu nosuku, ngaphezu kwamahora ethu okulala.
Uma ubaba wakho eyithanda imidlalo noma ephethe yonke into, ngalesi sipho uzoqiniseka. Vele, izindaba ezimbi ukuthi cishe impela uzochitha isikhathi eside uchazela uyihlo ukuthi angasebenza kanjani nalokhu IMi Band S1 ngaphandle kokuhlanya phakathi kwenqwaba yezinhlamvu zamaShayina.
I-smartphone yaphakathi nobubanzi; IMoto G4 Plus
Uma ngabe okufunayo kungumakhalekhukhwini, ungakhetha okukodwa kwalokhu okubizwa ngokuthi yi-mid-range emakethe njenge I-Moto G4 Plus. Inesikrini esingu-5.5-intshi esine-Full HD resolution, 2GB RAM kanye ne-16GB yesitoreji sangaphakathi.
Ngaphezu kwalokho, uyihlo angasebenzisa ikhamera enhle yalesi siginali nganoma yisiphi isikhathi ukuthatha izithombe nganoma isiphi isikhathi nendawo futhi angalokothi ayeke ukugcina imemori eyodwa kuze kube phakade.
I-smartphone ephezulu; I-Samsung Galaxy S7 Edge
Uma imali ingeyona inkinga singahlala sincike ku shayela i-smartphone ephezulu. Kulokhu esikhuluma ngakho I-Samsung Galaxy S7 Edge lokho kusinikeza amandla amakhulu, ubaba wakho angeke awasebenzise kakhulu. Ngaphezu kwalokho, ikhamera yayo ingenye yezinto ezihamba phambili emakethe, okuthi ngaphezu kokukuvumela ukuthi ugcine noma iyiphi inkumbulo ingunaphakade, izokuvumela ukuthi ukwenze ngekhwalithi enkulu kakhulu.
Uma ubaba wakho engenandaba nochungechunge noma ama-movie futhi ukhetha umculo, ungahlala uthambekele ekumnikezeni okubhaliselwe ku-Spotify.
Njengasendabeni yeNetflix, ungayisebenzisa futhi ukuyaba naye ngisho nabanye abantu.
Bhalisela i-Spotify LAPHA.
Impela kuzoba nzima ukuthola umzali othanda ukufunda izincwadi ngefomethi yedijithali, kepha kukhona ezinye futhi kubo i-eReader iyisipho esihle. Phakathi kwezinketho eziningi esinikezwa zona emakethe, okuhle kakhulu yizo I-Amazon Kindle.
Kuya ngemali esifuna ukuyisebenzisa, nezidingo zikababa wethu, I-Oasis yomusa, the Ukuhamba ngomusa, the I-Kindle Paperwhite noma i Kindle Oyisisekelo. Uma ubaba wakho ejabulela ama-eBooks futhi esebenzisa ukufundwa kosuku, ungahle udinge ukunquma ngawokuqala amadivayisi. Ngakolunye uhlangothi, uma ungaqiniseki kakhulu ngalokho ozokusebenzisa, ungazama i-Kindle eyisisekelo, incwadi ephelele ye-elektroniki ukuqala emhlabeni wokufunda kwedijithali.
I-Samsung Gear S3 Frontier
Ama-Smartwatches eze ezimpilweni zethu ukuthi azohlala, futhi mhlawumbe sesifikile isikhathi sokupha uyihlo eyodwa ukuze athuthukise, ukukhuluma ngezobuchwepheshe. Njengamanje kunenqwaba yamadivayisi walolu hlobo atholakalayo emakethe, yize sinqume ukunamathela kulena manje. I-Samsung Gear S3 Frontier.
Uma ungafuni ukusebenzisa imali engaka, ungakhetha i- I-Moto 360, a Ukubuka kwe-Huawei noma ezinye izinketho ezingabizi kakhulu ezifana I-Sony Smartwatch 3.
Uma ubaba wakho engumdlali wamageyimu, inketho enhle yokumnika leli Sonto elizayo yilona elisanda kwethulwa Nintendo Switch, ukuthi yebo futhi ngeshwa kuzokubiza idlanzana lama-euro.
Vele iyatholakala nge-Amazon ukuze ube nayo ekhaya kusasa, ngomdlalo ozikhethele wona futhi ukwazi ukudlala umdlalo wokuzama ngaphambi kokuba uyihlo awenze inkosi izinsuku nezinsuku. Kungaba futhi yisipho esihle sokuchitha isikhathi esihle nobaba wakho sijabulela, isibonelo, iZelda noma eminye imidlalo etholakalayo ye-Nintendo console.
Ingabe usuvele ukhethe isipho "sosuku lobaba"?. Sitshele ozikhethele esikhaleni esibekelwe ukuphawula kulokhu okuthunyelwe noma ngenye yezingosi zokuxhumana nabantu esikhona. Mhlawumbe ngombono wakho singaba nenye inketho esingayinika ubaba wethu.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Ngabe ufuna isipho sikababa wakho? Lokhu kuhamba phambili ngobuchwepheshe
IGoogle yethula inethiwekhi yevidiyo ye-YouTube ebizwa nge-Uptime
I-Rocket League ibuyekezwa ngemodi entsha yomdlalo